ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသီချင်းများ - သူငယ်ချင်းများကိုရည်စူးရန်အကောင်းဆုံးသီချင်း ၁၀ ခု• musanews
lunedì၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Psyche & seduction ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသီချင်းများ - သူငယ်ချင်းများကိုအပ်နှံရန်အလှဆုံး ၁၀ ခု
ဂီတကအမြဲပြောတယ် ခံစားချက် နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေး။ သူတို့ထဲတွင်, အချစ်သာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့များစွာသောရှိပါတယ် ချစ်ကြည်ရေးအကြောင်းရေးသားထားသောသီချင်းများ နှစ်များတစ်လျှောက်အီတလီနှင့်နိုင်ငံတကာဂီတမြင်ကွင်းများတွင်အရေးအကြီးဆုံးသောတေးရေးဆရာအချို့သည်။ သူတို့က i ကိုပြသသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ကြသည် ဒီအထူးနှောင်ကြိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့် ကြောင်းလုပ်လူနှစ် ဦး အကြားတည်သည် ယုံကြည်မှု, စာနာ, ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ရွေးချယ်မှု.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဖိုးတန်ကောင်းသော သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ထိုက်တန်သောအရေးပါမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမကြာခဏပြောပြပါ ဤကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများ နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့်
ဖြည့်စွက်ကာ အကြီးအစာရေးဆရာများ၏အလှဆုံးစာပိုဒ်တိုများသင်သည်ဤအရာအားလုံးကိုမြှုပ်နှံနိုင်သည် ချစ်ကြည်ရေးအပေါ်အထူးသီချင်းများ။ ကျနော်တို့အချို့စုဆောင်းပါပြီ 10ဂီတသမိုင်း၏သမိုင်းမှတ်တိုင်များအဖြစ်အမြဲယူမှတ်ထားသူများ။ မှ Renato သုည ai Beatlesယင်း Antonello Venditti ai ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားငါတို့ဒီမှာရှိတယ် အကြိုက်ဆုံးချစ်ကြည်ရေး - အကြောင်းအရာများသီချင်းများ!
၁။ Riccardo Cocciante, သူငယ်ချင်းအသစ်
Riccardo Cocciante မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသောဤသီချင်းသည်အချစ်ဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြောဆိုသည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်လုပ်ပေးချင်တာမှန်သမျှ နှင့်ဤ "ယဇျပူဇျော" အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြသည်။ သူငယ်ချင်းတွေကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရွေးကြတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမြဲတမ်းသရုပ်ပြကြတယ် သူတို့ရဲ့ချစ်ခင်၏ရိုးသားမှု။ ၎င်းတို့သည်အရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ရပ်များမှအကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဟန်အမူအရာများအထိကျယ်ပြန့်သောကြောင့်တစ် ဦး တည်းသာသာလျှင်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုမှတ်ယူသည်။ အဲဒီမှာဖြစ်ခြင်း.
ထို့အပြင် Riccardo Cocciante ၏ discography တွင်ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလှပသောသီချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိသည်။ ခေါင်းစဉ်က မင်းငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပါ နှင့်၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်အဖြစ်ဒီနှောင်ကြိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောငျ့ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုံကြသည်၊ ဆွေးနွေးကြသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေ့မျောသွားကြသည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို၊ သစ္စာဖောက် သို့မဟုတ်သူကလိုအပ်တဲ့အခါသူ့ကိုမနီးစပ်။
၂ ဘုရင်မ သူငယ်ချင်းဟာသူငယ်ချင်းပါပဲ
မိတ်ဆွေစစ်တစ်ယောက်ထံမှအသိအမှတ်ပြုရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ အတုတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်မြင်ချက်အရသာမန်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းစစ်မှန်ခြင်းထက်ရုပ်အသွင်အပြင်များအထူးသဖြင့်ကျရောက်သောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြသည်။ အားလုံးခက်ခဲလွန်းစေသည် ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ဂရုစိုက်တယ်၊. သူငယ်ချင်းဟာသူငယ်ချင်းပါပဲ ဘုရင်မ၏ဘုရင်မကဤအရာကိုပဲပြောလိမ့်မည်။ သင်သည်စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေများကိုနားလည်လိမ့်မည် လိုအပ်အချိန်အရာရာဟာမှားယွင်းနေပုံရပြီးသင်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်မှုပေးဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်တဲ့အခါ သူတို့သည်သင့်အနားမှာနေရကြမည်။
၃။ Renato သုည၊ သူငယ်ချင်း
အဆိုပါစစ်မှန်တဲ့ခင်မင်မှု ၎င်းသည်အချိန်ကာလကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲအမှန်ပင်၊ အဲဒါကိုကြားမှရှင်သန်နိုင်ဖို့စီမံထားတယ်။ Renato Zero သည်ဤရှုထောင့်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် သူငယ်ချင်း - 1980 ရက်စွဲပါ - သူကြောင့်တစ် ဦး ကြောင့်စွန့်စားမှုအတွက်သူ့အဖော်နှစ်သိမ့်တွေ့ဘယ်မှာ ချစ်တယ် ပြီးတော့သူငယ်ငယ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်း၏ဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်သွားနိုင်သည် အတူတူရှိနေသေးတယ်.
4. Rembrandts, မင်းအတွက်ကိုယ်ရှိနေမယ်
အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်သူတို့ဘ ၀ ၌ဤသီချင်း၏မှတ်စုများကိုမည်သူက ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ကခုန်ခြင်းမပြုခဲ့သနည်း။ ကျော်ကြားသောတေးသံ တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ သူငယ်ချင်းများ, မင်းအတွက်ကိုယ်ရှိနေမယ် အဆိုပါ Rembrandts အားဖွငျ့ချစ်ကြည်ရေး၏အဓိကဆောင်ပုဒ်ပြန်သွားသည် အမြဲတမ်းတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့အဖြစ်ခြင်း။ အဆိုးဆုံးအချိန်တွေမှာမိတ်ဆွေစစ်တွေသာလျှင်ငါတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးသူတို့နဲ့အတူသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့၊ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ငါတို့သည်လည်းထိုနည်းတူပြုကြ၏: «မိုးရွာစပြုလာရင်မင်းအတွက်ငါရှိလိမ့်မယ်၊ ငါအရင်လိုလုပ်ခဲ့ဖူးသလိုငါလည်းမင်းအတွက်ရှိနေမှာပါ။ မင်းလည်းငါ့အတွက်ရှိနေလို့ပါ။"။
၅ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယူမယ်
အချစ်ဆိုတာမင်းကိုကြယ်တွေဆီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲ။ သငျသညျနစ်မြုပ်အောင်နိုင်စွမ်း ဝမ်းနည်းမှုနှင့်နာကျင်မှု၌တည်၏။ Antonello Venditti သည်ဤအခြေအနေကိုသူ၏ကျော်ကြားမှုတွင်ရှင်းပြခဲ့သည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယူမယ်အဓိကအဓိကအကြောင်းအရာအဖြစ်ထင်ရှားသည့်နေရာ ဆက်ဆံရေး၏အဆုံးခံစားနေရပြီး, အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် မင်းအနားမှာသူငယ်ချင်းရှိဖို့လိုတယ် အဲဒါကသူချစ်တဲ့မိန်းမကိုမေ့သွားအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၆ ။ ငါ့အပေါ်မှာယုံ
Antonello Venditti ကိုသူငယ်ချင်းလိုချင်သည်မှာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံပုံမပေါ်ပါက၊ ငါ့အပေါ်မှာယုံ ဘရူနိုမားစ်ကမူဤအရာအားလုံးဖြစ်ပျက်နေသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောလတ်တလောသီချင်းတစ်ပုဒ်မှာအလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတေးသီချင်းထဲတွင်အလွန်ချိုသာသောစကားဖြစ်သည် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး။ ကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရသောအခါ, ငါတို့ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ငိုတစ် ဦး ပခုံး (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ကူညီရန်တစ်စုံတစ် ဦး က“ ရေတွက်လျှင် ၃” သာရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး.
၇။ Biagio Antonacci နှင့် Sergio Dalma၊ သင့်မှာရှိသည့်သူငယ်ချင်း
နေ့စဉ်အသက်တာ၏ကတိက ၀ တ်များနှင့်မမျှော်လင့်သောဘဝအသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်ချင်းများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် စစ်မှန်သောခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်နည်းလမ်းများကိုရှာတွေ့နိုင်သည် ဝေးကွာမှာပင်ရှင်သန်။ Biagio Antonaccionacci သည်သူ၏သီချင်းတွင်ဖော်ပြထားသည် သင့်မှာရှိသည့်သူငယ်ချင်း။ နေသောသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပါ တ ဦး တည်းအခြားများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အစဉ်မပြတ်မကြားဘူး၊ မမြင်ရဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်ရင်သိတယ်၊ သူတို့ကသူတို့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်အဆင်သင့်တစ်စုံတစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်.
ငါတို့က neurotic ပါ
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
၈ ။ သူငယ်ချင်းများထံမှအနည်းငယ်အကူအညီဖြင့်
Ringo Starr အတွက် John Lennon နှင့် Paul McCartney မှရေးသားခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများထံမှအနည်းငယ်အကူအညီဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂန္ထဝင်ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး အထီးကျန် နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြားဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ကျော်လွှားနေကြသည် သူငယ်ချင်းများထံမှအနည်းငယ်အကူအညီက သေချာတာပေါ့၊ သူတို့ရှိနေခြင်းဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ဖို့နဲ့ချစ်ဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာဖို့လိုတာကိုလုံးဝအစားထိုးမပေးပါဘူး။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ယောက်တည်းမခံစားရဘူး.
၉ ။ မင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ
In မင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ, Giorgia ၏သီဆို All- အမျိုးသမီးချစ်ကြည်ရေး နှစ်များတစ်လျှောက်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးခိုင်မာတောင့်တင်းသောနှောင်ကြိုးအကြောင်းပြောသောစကားစုများဖြင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ချရသောလျှို့ဝှက်ချက်များ၊ ရှည်လျားသောစကားဝိုင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ကူညီမှုတို့သည်လုပ်သည် ထူးခြားတဲ့နှင့်ထူးခြားသောဖော်ပြထားဆက်ဆံရေးမျိုးအခက်ခဲဆုံးအချိန်များတွင်မိန်းကလေးနှစ် ဦး ကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။
၂ ဘုရင်မ သင်ကကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ
နောက်ဆုံးတော့ဘုရင်မ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကသီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အမြဲပြန်လာခဲ့တယ် သင်ကကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ အင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်းဘယ်လိုအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် သင်ချစ်သောအမျိုးသမီးတွင်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုလည်းရှာနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုမျှော်လင့်ရသည် နားလည်မှု, ထောက်ခံမှုနှင့်ချစ်ခင်မိတ်ဖက်တစ် ဦး အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အသွေးများ။ ဒီသီချင်းမှာ ချစ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်း ၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ခွဲခြားခြင်းမခံရတော့ဘဲအသက်ရှင်သန်ရန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေသည် အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတစ်ခု.
အကယ်၍ သီချင်းတစ်ပုဒ်အစားသင်ကသင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းထံအပ်နှံချင်သည် ကြီးစွာသောစာရေးဆရာများ၏စာပိုဒ်တိုများထဲကတစ်ခု, သင်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ရှိရာဤပြခန်းမှ browse နှင့်လှုံ့ဆော်မှုယူနိုင်ပါတယ် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးမြင်ဆုံးစကားလုံးများ!
ယခင်ဆောင်းပါးInstagram ပေါ် bikini ရှိဘား Refaeli
နောက်ဆောင်းပါးThelma & Loiuse, Brad Pitt ရဲ့အရှက်ရခြင်း -“ ငါ wimp 'နဲ့ Geena Davis ကငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်”
MazuTeam MasterMinds- သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲ။
Espadrilles နွေရာသီ 2019
ဇီဝဗေဒနာရီ: ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ
ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2021
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2020